ရွှေဘောလုံးသတင်းကြီးနေတဲ့ မက်ဆီ ၊ ၂ မှတ်လျော့သွားတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ အရှိန်မပျက်တဲ့ ရီးရဲ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ - xyznews.co
ရွှေဘောလုံးသတင်းကြီးနေတဲ့ မက်ဆီ ၊ ၂ မှတ်လျော့သွားတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ အရှိန်မပျက်တဲ့ ရီးရဲ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ
ဒီကနေ့မှာ ပေးအပ် ချီးမြှင့်မယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံး ( Ballon D’or ) ဆု ကို အာဂျင်တီးနား နဲ့ PSG တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ က ရရှိမယ် လို့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ် နေခဲ့ ပါပြီ ။
မက်ဆီ ဟာ ရွှေဘောလုံး ကို ၆ ကြိမ် ရရှိ ထားဖူးပြီး ဒီညမှာ ထပ်မံ ရရှိပါက ၇ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်လာ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့က PSG အတွက် စတင် ပါဝင် ကစားခဲ့တဲ့ ခံစစ်မှူးကြီး ဆာဂျီယို ရာမိုစ့် ကလည်း မက်ဆီ ဟာ ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံး ဆု နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း ထောက်ခံ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ စိန့် အက်တီယန် နဲ့ ပွဲမှာ ခြေခေါက်လဲပြီး ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ PSG တိုက်စစ်မှူး နေမာ ဟာ ပွဲ အပြီးမှာ ကွင်းထဲ ကနေ ချိုင်းထောက် အကူအညီ နဲ့ ထွက်ခွာ သွားတာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ နေမာ ရဲ့ ဒဏ်ရာ အတိမ်အနက် ကိုတော့ မထုတ်ပြန် သေးပါဘူး ။
နာပိုလီ အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဂန္ထဝင် ကစားသမားကြီး ဒီယေဂို မာရာဒိုနာ အတွက် ပြုလုပ် ထားတဲ့ အထိမ်း အမှတ် ရုပ်တု ကို မနေ့က ဖွင့်လှစ် ပြသ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ နာပိုလီ ဟာ မာရာဒိုနာ ရဲ့ နံပါတ် ၁၀ ကိုလည်း အနားပေးထားတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ အဲရစ် ဘိုင်လီ က အသင်းသားတွေ ဟာ အသစ် ရောက်လာမယ့် နည်းပြ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား နေကြကာ အဝတ်လဲခန်း အတွင်း စကားဝိုင်းတွေ ရှိလာခဲ့တယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူအက်စ် အိုးပင်း တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲပြီး စတား တယောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဗြိတိန် ဆယ်ကျော်သက် တင်းနစ်မယ်လေး အမ်မာ ရာဒူကနူ ကတော့ ဒီနှစ် အတွက် Sports Personality of the Year ဆု ကို သူမ အစား သူမ လေးစားအားကျ ရတဲ့ နာမည်ကျော် ဖော်မြူလာဝမ်း ပြိုင်ကား ချန်ပီယံ လူးဝစ် ဟာမီလ်တန် ကို ရရှိ စေလိုတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြကြီး ပက် ဂွာဒီယိုလာ ဟာ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲ မတိုင်ခင် နဲ့ ပထမပိုင်း အပြီးမှာ ကွင်းထဲက နှင်းတွေကို အကောင်းဆုံး ရှင်းလင်းပြီး ဘန်လေ – စပါး ပွဲလို ပွဲရွှေ့ဆိုင်းရခြင်း မရှိအောင် ကြိုးစား ပေးခဲ့ ကြတဲ့ စီးတီး ကွင်းဝန်ထမ်းတွေကို ချီးကျုး ဂုဏ်ပြု စကား ဆိုသွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မနေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူး တို့နဲ့ အမှတ် မကွာတော့ဘဲ ပိုမို အကျိတ် အနယ် ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ သူတို့ရဲ့ ပုံစံကောင်းကို ဆက်ထိန်း ထားခဲ့ပြီး ဆီဗီးလား ကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ အတွက် ဘန်ဇီးမား နဲ့ ဗီနီဆီယပ် ဂျူနီယာ တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းပေးခဲ့ပြီး ဆီဗီးလား နည်းပြ လိုပီတီဂွီ ကတော့ သူတို့ အသင်း ပင်နယ်တီ မရခဲ့မှု အပေါ် ဝေဖန် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ နာပိုလီ အသင်းဟာ ဂိုးပြတ် နိုင်ပွဲ ရခဲ့ပြီး အေစီမီလန် က ဆာဆူအိုလို ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် နာပိုလီ က အမှတ်ပေး ဇယား ကို ၃ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင် လိုက် နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article မန်ယူနိုက်တက်ဖက်ကို လက်ဆောင်ဂိုး ပေးခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့်ဖက်မှ ကာကွယ် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ တူချယ်
Next Article မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲမှ ခြေစွမ်း နုံချာခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦး အပေါ် အပြိုင် ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့ ဟက်ဆယ်ဘိန့်နဲ့ ရွိုင်ကိန်